ပိုးသတ်ဆေး သောက်ပြီးနောက် ဝမ်းလျှောလာခဲ့ရင် - Hello Sayarwon
ပိုးသတ်ဆေး သောက်ပြီးနောက် ဝမ်းလျှောလာခဲ့ရင်
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး (Antibiotics) ဆိုတာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ရောဂါကို ကုသပေးနိုင်သလို နောက်ထပ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တချို့ကိုလည်း ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးမဆို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းနဲ့အများတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဝမ်းလျှောခြင်းကတော့ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီးနောက် အဖြစ်များတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ပိုးသတ်ဆေး သောက်ပြီး ဝမ်းလျှောတာလဲ ?
ပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဆဲလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချင်း ကွဲပြားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်တွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားမှာ ပြင်ပကနေ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးဖို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးအစားရှိသလို အစာခြေစနစ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာ သဘာဝအတိုင်း ရှိနေတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေလည်း ပါပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်စေသလို အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ပေါက်ဖွားခြင်းမဖြစ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Clostridium difficile လို့ ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ကြီးထွားနှုန်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီတော့ ပိုးသတ်ဆေး သောက်လိုက်တဲ့အခါ ကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရော၊ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပါ အကုန်သတ်ပစ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဝမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရတာပါပဲ။
ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းမှာ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပါ တွေ့ရနိုင်လဲ ?
ပိုးသတ်ဆေး စသောက်ပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေအပြင် ကျန်းမာရေးအကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားလေးတွေပါ နည်းနည်းချင်းစီ သေကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသမှုပြီးသွားတဲ့နောက် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဝမ်းလျှောတတ်ပါတယ်။
• တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၃ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဝမ်းသွားခြင်း
• ဝမ်းဗိုက်ထဲက ရစ်ပြီး နာနေခြင်း၊ အောင့်နေခြင်း
• အဖျား အနည်းငယ်တက်ခြင်း
• အစာစားချင်စိတ် နည်းလာခြင်း
• ပျို့အန်တက်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကိုပါ တွဲဖက်ပြီး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဝမ်းလျှောတယ်လို့ထင်ရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ
ကိုယ်လည်း အစားမမှားပဲနဲ့ ဝမ်းလျှောတယ်ဆိုရင် လက်ရှိသောက်နေတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ ရောဂါကြောင့်လားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးကြောင့်ဆိုရင်တော့ ပိုးသတ်ဆေးကို ရပ်တာနဲ့ သက်သာသွားပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကိုတော့ ပြန်ဖြည့်ပေးရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ဝမ်းလျှောတာလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။ ပိုးသတ်ဆေးကြောင့်ဆိုရင်တော့ ဆေးပြောင်းပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်တော့ ဆေးမရပ်ပါနဲ့။
တခြားဝမ်းလျှောတာတွေ ကုသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ လျော့နည်းကုန်တဲ့အတွက် ဒါကို ပြန်ဖြည့်ပေးဖို့ပါ လိုတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
ရေနဲ့ ဓာတ်ဆား ပြန်ဖြည့်ပါ။
ဝမ်းသွားတဲ့ထဲမှာ ရေနဲ့ ဓာတ်ဆားတွေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက် ဓာတ်ဆားရည်သောက်ပေးပါ။ ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲဆိုတော့ ဝမ်းသွားချိန်ဆုံးရှုံးတာနဲ့ ကာမိအောင် လုံလုံလောက်လောက်သောက်ပေးပါ။
ဒိန်ချဉ်လို အစားအသောက်ကနေ ပြန်ဖြည့်လို့ရသလို ခုဆိုရင် ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနေတဲ့ ဆေးအမှုန့်ထုပ်လေးတွေ၊ ဆေးလုံးလေးတွေ ရှိနေပြီဖြစ်လို့ ဒါတွေနဲ့ အလွယ်ပြန်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။
ဝမ်းပိတ်ဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲ သောက်စေလိုပါတယ်။ ဝမ်းပိတ်ဆေးဆိုတာ အူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို နှေးစေလို့ ဝမ်းသိပ်မသွားတော့ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ဒါကြောင့်ပဲ အူထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ အောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားလိုက်ရင်တော့ အဆိပ်အတောက်တွေ အပြင်ကို ပါသွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် မသောက်ပါနဲ့။
ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဝမ်းလျှောတာကို ကာကွယ်ဖို့
ပိုးသတ်ဆေးသောက်တဲ့အခါ အူလမ်းကြောင်းအကျိုးပြု Micro Flora ပိုးကောင်လေးတွေနဲ့ တွဲသောက်ကြည့်ပါ။ သဘာဝအစားအစာဖြစ်ဖြစ်၊ အလွယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ သောက်ဆေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တွဲသောက်တာက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား ဆုံးရှုံးမှုကို ကာမိစေမှာပါ။
ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ မကြာခဏ လက်ဆေးပါ။
ဆေးကို အညွှန်းအတိုင်းသောက်ပါ။ ဥပမာ အစာနဲ့ သောက်ရမယ့်ဆေးဆို အစာနဲ့ သောက်တာက အူလမ်းကြောင်းကို ဆေးဒဏ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပိုးသတ်ဆေးကို လိုမှသောက်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ သောက်တာက ရောဂါမသက်သာတဲ့အပြင် ဝမ်းလျှောတာလိုမျိုး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပဲ ခံစားရပါတယ်။
အရင်က ပိုးသတ်ဆေးသောက်လို့ ဝမ်းလျှောဖူးရင် ဆေးကို မှတ်ထားပါ။ ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပြပါ။ ဒါမှ ဆေးကို ပြောင်းပေးလို့ရမှာပါ။
https://www.healthline.com/health/antibiotics-diarrhea#prevention (July 23, 2020)